सफल त्यो मानिस हुन्छ जो थप एक कोशिस गर्छ, डा. बुद्धि मल्लको विचार - Safal Awaj Safal Awaj
सफल त्यो मानिस हुन्छ जो थप एक कोशिस गर्छ, डा. बुद्धि मल्लको विचार
भाद्र २६ गते २०७८ मा प्रकाशित
पूर्व अमेरिकी गीतकार स्टिभ वण्डरले भनेका छन् – संघर्ष सहितको जीवनको मात्र अर्थ हुन्छ । विजय र पराजय त ईश्वरको हातमा मात्रै हुन्छ । त्यसैले हामीले संघर्षमा पनि उत्सव मनाउन सक्नुपर्छ । संघर्षबिनाको नतिजा मूल्यहीन हुन्छ । जसरी बिनापढाको प्रमाणपत्रले कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसरी नै बिनासंघर्षको मानिसको जीवनको अर्थ हुँदैन । मानिसको धर्म संघर्ष गर्नु हो भने भगवानकाे धर्म मानिसलाई पास वा फेल गर्ने हो भनेर मानिसले निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्छ ।
१९८१ मा ईजरायलका २२ वर्षिय युवक योस्सि घिन्स्बर्ग साथीहरुसंँग अमाजोनको जंगलमा घुम्न निस्कन्छन् । साथीहरुसँंग विभिन्न दृश्य अवलोकन गर्दै रमाउँदै काठहरुको डुङ्गा बनाएर नदीमा तैंरिदै जाँदा अचानक डुङ्गा ठुलो छालसहित तल खस्दा उनी साथीहरुबाट बिछोडिन्छन् । बल्ल तल्ल नदीबाट निस्कन सक्छन् । निस्केपछि साथीभाइ खोज्दाखोज्दा उनी जंगलको विभिन्न ठाउँ पुग्छन्, चिच्याँउछन् तर उनको आवाज सुन्ने त्यस घनघोर जंगलमा कुनै मानिस हुँदैनन् ।
अग्लाअग्ला र घनाजंगल भएको कारणले उसलाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कता हो केही थाहा हुंँदैन। त्यसैले हिंड्दाहिंडदा पहिला जुन स्थानबाट हिंड्न सुरु गरेका थिए, त्यहि स्थानमा आइपुग्छन् । भोक, प्यास, निद्राको बावजुद अत्यन्तै कष्ठका साथ बल्लतल्ल घनाजंगलबाट अलि पातलो जंगलजस्तो ठाउँमा आइपुग्दा उसलाई थोरै बाँच्ने आश पलाउँछ। तर, यतिबेलासम्म उनमा हिंड्न सक्ने शक्ति रहँदैन । योस्सिले नजिकै कमिलाको गुँड देख्छ र त्यसलाई समातेर आफ्नो ज्यानभर दल्छ । कमिला ज्यानभर फैलिएर टोक्न थालेपछि उ त्यसको पीडाले आत्तिएर एकदमै छिटो दौडिन थाल्छ । अनि जंगल पार गरेर नदी किनार पुग्छ । अन्तमा उसलाई खोज्दै आएको उसको साथीले उसलाई उद्धार गर्छ । यस्तो दर्दनाक घटनाबाट आफूलाई बचाएका योस्सि अहिले एक सफल उद्योगपति, मोटिभेशनल स्पिकर, लेखक तथा सामाजिक अभियन्ताकाे रुपमा स्थापित भएका छन् । उनको यही वास्तविक घटनामा आधारित फिल्म जंगल २०१७ मा रिलिज भएको थियो ।
योस्सि जस्ता ब्यक्तिहरुबाट हामीलाई साहसिलो बन्न, धर्यवान भएर थप एक कोशिस गरिहनका लागि उत्प्रेरणा मिल्छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हिम्मत नहारिकन लगातार कोशिस गरिरहे, जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सामना गर्न सकिन्छ भनेर हिम्मत बटुल्ने योस्सिको अदभूत हिम्मत र साहसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । सफलताले पनि साहसी, धैर्यवान र निरन्तर कोशिस गरिरहने मानिसलाई नै पछ्याउछ र उसैको पछिपछि हिंड्न मन पराउँछ ।
मरूभूमिमा हिंड्दाहिंड्दा भोक प्यास एवं थकानले बेहोशीको हालतमा पुग्न लागिसकेको एकजना मानिसले केही नजिकै एउटा छाप्रो घर देखेपछि आत्मबल मिल्छ । लड्दै, उठ्दै, घस्रंदै त्यहाँसम्म पुगेर हाते पम्पबाट पानि तान्न कोशिस गर्छ तर पानि नआएपछि उ अब जिन्दगीबाट हार मान्नै लाग्न लाग्दा पम्पमाथि एउटा डोरीमा पानिले भरिएको बोत्तल देख्छ । त्यहाँ सूचना लेखिएको हुन्छ- यो बोत्तलको सबै पानी हाते पम्पमा खन्याइदिनुहोस् र त्यसपछि पम्प तान्नु भए पानि आउँछ । तपाईले पानी पिउनुभएपछि फेरि यो बोत्तल भरेर राखिदिनुहोला ।
थकान र तिर्खाले ज्यानै जान लागिसकेको अवस्थामा यस्तो सूचना देखेपछि मानिस के गर्ने के गर्ने भन्ने अन्यौलमा पर्छ । बल्लतल्ल भेटिएको पानी पनि पम्पमा खन्याउने हो भने पछि पानी आउने हो कि होइन, फेरि सूचनाको पालना नगर्नु पनि कसरी नगर्नु र । केहीछिनको अन्यौलता तोडेर उसले हाते पम्पमा पानी खन्याउँछ र पम्प तान्छ । दुई तीन पटक पम्प तान्नासाथ पम्पबाट मज्जाले पानी आउँछ र उसले धित मर्ने गरेर पानी पिएर बोत्तलमा पानी भर्छ । उक्त सूचनाको तलपट्टि मैले विश्वास गरेको थिएँ, पानी आउँछ भनेर थपिदिन्छ ।
माथिको कथाले हामीलाई कुनै पनि अवस्थामा हरेश खानु हुँदैन । अन्तिम समयसम्म पनि धैर्यवान बन्नुपर्छ र निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । मरूभूमीमा भोक, प्यास, थकानले एक पाला चाल्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्दा मानिसले घस्रि घस्रि भए पनि भित्रैदेखि आत्मबल निकालेर एकएक पाईला चालेर, घस्रेर अन्तमा हाते पम्पसम्म आईपुग्नु र त्यसपछि पनि धर्य गरेर बोत्तलको पानी नपिइकन पम्पमा खन्याउनुले उक्त मानिसमा संघर्ष गर्ने र धर्यता क्षमता भएको देखिन्छ । हामीलाई पनि धैर्यवान हुन र थप एक कोशिस गर्न सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ ।
जो मानिस संघर्ष गर्दागर्दा पटकपटक लड्छ, पटकपटक लड्दा पनि फेरि उठेर अगाडि बढ्छ, अन्तत समस्याहरु पनि उसँग पछि हट्छ र उसले गन्तब्य हाँसिल गर्छ । मानिस यस संसारमा जन्मदा उसँग केही पनि हुदैन तर संघर्षको बलमा उसले जीवनमा धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ । उसलाई संघर्ष गर्न प्राकृतिकरुपमा नै प्रदान गरिएको हुन्छ । जुन मानिस आफूले तय गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न विभिन्न संघर्षका चरण पार गर्न सक्छन्, उ वास्तविक नायक ठहरिन्छ ।
संघर्षले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ । खेलहरुमा खेलाडीहरुला‌‍‍‌‌‍इ अन्तिम समयसम्म खेल्नुपर्ने नियम हुन्छ । खेलाडीहरु अन्तिम मिनेट, अन्तिम सेकेण्डसम्म थप एक प्रयास गरिरहन्छन् । क्रिकेटमा अन्तिम बलसम्म ब्याट्सम्यानहरुले रन बटुल्ने प्रयास गर्छन् । बलरहरुले विकेट लिने प्रयास गरिरहन्छन् । फूटबलमा पनि खेलाडीहरुले अन्तिम समयसम्म पनि गोल गर्ने प्रयास गरिरहन्छन् भने गोलकिपरले गोल बचाउने प्रयास गरिरहन्छन् । जसरी खेलमा खेलाडीहरु अन्तिम समयसम्म थप एक प्रयास गरिरहन्छन, त्यसरी नै मानिसले जिन्दगीमा पनि अन्तिम समयसम्म थप एक प्रयास गरिरहनुपर्छ।
मानिसले जीवनमा भोग्ने सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी असफलता प्राप्त गर्नु हो तर थप एक प्रयासले चमत्कार हुन सक्छ । के थाहा थप एक प्रयासले पासा नै पल्टिन सक्छ र उसलाई सफलता प्राप्त हुन सक्छ । थप एक कोशिस गरेन भने त असफलता निश्चित नै छ भने किन थप एक कोशिस गरेर सफलताको बाटो नखोज्ने ?
लेखक डा. बुद्धि मल्ल बैंकर हुन् ।